U-JP Brownstone womlando onendawo yokupaka. Izilwane ezifuywayo Siyakwamukela! - I-Airbnb
U-JP Brownstone womlando onendawo yokupaka. Izilwane ezifuywayo Siyakwamukela!
311 okushiwo abanye
Boston, Massachusetts, i-United States
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Lynel
U-Lynel Ungumbungazi ovelele
Itholakala kwenye yezindawo ezihamba phambili zase-Boston, le yunithi yekhona ekhanyayo engamamitha-skwele angu-1200 eBrownstone yomlando weminyaka engu-120 iyindawo ekahle yokubalekela. Indawo yayo enhle kakhulu yizinyathelo nje ukusuka kwa-T nokuhamba ibangana nje ukuya ezitolo nezindawo zokudlela e-Center Street. Ilungele izithandani, abantu abazihambela bodwa, abahambi bebhizinisi, nabangane abanoboya (izilwane ezifuywayo).
Lesi sikhala siyi-brownstone evuselelwe iminyaka engu-120 ubudala. Kukhona indawo yokuhlala evulekile engamamitha-skwele ayi-1200. Ithola ukukhanya okukhulu kusukela ekuphumeni kwelanga kuya ekushoneni kwelanga. Izinsiza zibuyekeziwe futhi zisebenza kahle.
4.87 · 311 okushiwo abanye
I-Jamaica Plain iyingxenye yemfashini yaseBoston enikeza indawo eningi eluhlaza. Leli khaya lisendaweni yaseSumner Hill eJP futhi liyindlela elula yokuya e-Center Street. I-Jamaica Pond enhle ne-Arboretum nakho kuwuhambo olula. Indawo yokuhlala. Indawo iseduze nesitimela futhi kusho ukuthi ungezwa izitimela ezivela ezingxenyeni ezithile zekhaya. Izitimela azihambi sekwephuzile futhi nekamelo lokulala lithule.
Ngizokwenza noma yini engingayenza ukuze ngenze ukuhlala kwakho kukhululeke ngangokunokwenzeka okuhlanganisa izincomo zokudla kanye nokuhlinzeka ngosizo ngemibuzo ehlobene nohambo. Ngibe isakhamuzi saseBoston kusukela ngo-1983!
ULynel Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: STR-447200
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$1200.
Hlola ezinye izinketho ezise- Boston namaphethelo